သင်ကကားတစ်စီးသို့မဟုတ်ထရပ်ကားပေါ်တွင် vin နံပါတ်သင်မော်တော်ယာဉ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုဇာတ်ကောင်ရုံတစည်းထက်ပိုမိုကြောင်းသိခဲ့ပါ. သင့်ရဲ့ vin နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ် 17 သင်ရှိသည်သို့မဟုတ် purchasing စဉ်းစားနေပါတယ်သောကားတစ်စီးမှများသည်ပြိုင်စံရှားကြောင်းအက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များတက်ဖန်ဆင်းဂဏန်း. တစ် vin number ကို lookup ပြုလုပ်နေလုပ်နေတာအားဖြင့်သင်တို့ကိုပြန်ဘယ်မှာကြောင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သောအခါအများကြီးပိုအရေးကြီးတဲ့အချက်အလက်တွေမှမော်တော်ယာဉ်ခြေရာကောက်နိုင်ပါ.
သင့်ကားပေါ်တွင်သင်၏ vin number ကိုလူသားတွေကတစ်ဦးကိုလက်ညှိုးပုံနှိပ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏, အဘယ်သူမျှမနှစ်ဦးကားအတူတူပင်တ. သင့်ကားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကဒီမှာတောင်မှကြောင့်မက္ကစီကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြအံ့သောငှါထွက်ရှာရန်သင့်အားအံ့အားသင့်စေခြင်းငှါ,, ကနေဒါနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ပင်တင်ပို့ရောင်းချဂျပန်ကနေလမ်းအပေါင်းတို့, ဂျာမနီက, ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှများစွာသောအခြားနိုင်ငံများမှ.
သင်တစ်ဦး vin number ကို run လိုက်တဲ့အခါ (တစ်ဦးက auto သမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာအဖြစ်ကိုလည်းငါသိ၏) သင်အသုံးပြုနေတဲ့နေသော provider ကအမှန်တကယ် vin အရေအတွက်ကိုဝှက်နှင့်ကားတစ်စီးတည်ဆောက်ခဲ့ရှိရာအရပ်၌သင်တို့ပြောပြပါလိမ့်မယ်, သူကထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်လမ်းညွှန်လက်စွဲစာအုပ်ကိုသို့မဟုတ်တန်ခိုးပြတင်းပေါက်များနှင့်သော့ခလောက်ရှိပါတယ်ဖြစ်စေမ, အင်ဂျင်အရွယ်နှင့်ဂီယာအမျိုးအစား. ဒါ့အပြင်, သင်တစ်ဦး vin number ကို lookup ပြုလုပ်နေကို run သည့်အခါသင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောပိုင်ရှင်တွေအကြား odometer ဖတ်ကြားအဖြစ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ကားကိုအစဉ်အဆက်ကိုခိုးယူထားသည်ဖြစ်စေမ, မော်တော်ယာဉ်အစဉ်အဆက်ရေကြီးခဲ့ပျက်စီးမှုခံစားခဲ့ရမူလျှင်, နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မော်တော်ယာဉ်နှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်လက်ရှိပြန်လည်သိမ်းဆည်းရှိပါတယ်လျှင်. ထိုကားပေါ်တွင်တစ်ဦးလီယန်ရှိလြှငျသငျသညျအပင်ထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်အစဉ်အဆက် repossessed ထားလျှင်, သို့မဟုတ်ပါကအစဉ်အဆက်အနေနဲ့အာမခံကု​​မ္ပဏီအားဖြင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုရှိခဲ့လျှင်.
အကြှနျုပျ၏ vin နံပါတ်စစ်ဆေး
ဒါကြောင့်ယခုသင်ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုနေတာစေခြင်းငှါ, “ငါသည်ငါ့ vin number ကိုဘယ်လောက်စစ်ဆေးကြပါ”? ကံကောင်းထောက်မစွာကိုအင်တာနက်နှင့်အတူ, ဒါကြောင့်မျှမျှတတလွယ်ကူသည်. ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုရဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည် vin အရေအတွက်ကို မော်တော်ယာဉ်၏. အားလုံးသည်ကားများနှင့်ကုန်တင်ကားသင်ကားရှေ့မှနျ၏ရှေ့မှတဆင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်သည်သောယာဉ်မောင်းများဘက်မှပေါ်တွင် dash အပေါ်သတ္တုသေးငယ်တဲ့အပိုင်းအစပေါ်တွင် vin နှိပ်ကြပါပြီ. ဖြည့်စွက်ကာ, အချို့သောထုတ်လုပ်သူများကိုလည်းတံခါးအတွင်း၌ပေါ်တွင် vin number ကိုထည့်သွင်း, ကိုပါးပျဉ်းအောက်နှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်းကုန်းပတ်အဖုံးသို့မဟုတ်စည်အပေါ်. အရေးပါသော note ကို: သင် vin နံပါတ်များတူညီနေကြသည်မဟုတ်ကြောင်းပြား၏စုံတွဲတစ်တွဲပေါ်သတိထားမိစေခြင်းငှါ. ဤသည်သေချာပေါက်ယာဉ်အခိုးခံရကြောင်းဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး. ဒါဟာမတော်တဆမှုဖြစ်ရပြီနိုင်ပါသည်နှင့်အာမခံကု​​မ္ပဏီသာမယ့်အစားအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကသူမြား၏ကားတစ်စီးပေါ်မှာနေရာချခြင်းကိုခံရဖို့အသုံးပြုအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အခွင့်ပြုခဲ့. သို့သော်, သင်တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ်ဖြတ်ပြီးလာကြဘူးနဲ့ကအားလုံးကိုပြားပေါ်မှာရှိသမျှသောကွဲပြားခြားနားသော vin နံပါတ်များရှိပါတယ်လျှင်, သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားကြောင့်အထူးသဖြင့်မော်တော်ယာဉ်ထဲကနေပယ်ရှားနေဖို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်.
Next ကိုသူကသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုသွားနှင့်အွန်လိုင်းမသွားကဲ့သို့ရိုးရှင်း. တစ်ဦးမော်တော်ယာဉ် vin စစ်ဆေးမှုများကိုဆက်ကပ်သောအများအပြားဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့သည့်ကုမ္ပဏီများရှိပါတယ်. youtrust သို့မဟုတ်သင့်မိတ်ဆွေများကိုအကြံပြုပါသည်နဲ့ရိုးရိုးသင့်လျော်သောအကွက်ကိုထဲသို့ vin number ကိုရိုက်ထည့်ပါတစ် vin number ကိုစစ်ဆေးမှုများဝန်ဆောင်မှုကိုရှာပါ, ထိုသို့လွယ်ကူပါတယ်. အဆိုပါလုံးဝအခမဲ့ VIN စစ်ဆေးမှုများပုံမှန်အားဖြင့်သင်ကထုတ်လုပ်သူများထံမှတို့နှင့်အတူကြွယာဉ်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များပေး vin စကားဝှက်ကိုရှင်းလင်းဖေါ်ပြများမှာ.
သင်တစ်ဦးအခမဲ့ vin အရေအတွက်ကိုရှာဖွေရေးပြုလျှင်ထိုနှစ်တွင်သင်ပြလိမ့်မည်သည့်, လုပ်နှင့်မော်ဒယ်နှင့်အင်ဂျင်နှင့်တခြားအရေးကြီးတဲ့သတင်းအချက်အလက်, သင်အလေးအနက်စက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များထုတ်ဖေါ်မည်သည့်အပြည့်အဝမော်တော်ယာဉ်သမိုင်းကိုအစီရင်ခံစာနှင့်အတူဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်, odometer ပြဿနာများ, ကားကိုမတော်တဆဖြစ်ဒါဘွားမူလျှင်.
ထို vin number ကိုစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်, ဒါကြောင့်သင်အချိန်အများကြီးကိုကယ်တင်နိုင်, ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်း. ကသူတို့အသုံးပြုသောကားတစ်စီးရောင်းချနေမှကြွလာသောအခါပြည်သူ့အမြဲသမ္မာတရားကိုမပြောလိမ့်မယ်. တစ် vin number ကိုစစ်ဆေးမှုများလုပ်ခြင်းအားဖြင့်, ဒါကြောင့်ကောင်းစွာသင်အစေခံမည်ကိုကားတစ်စီးရှိခြင်းအကြားလောကရှိလူအပေါင်းတို့သည်ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, သို့မဟုတ်သင်ငယ်လေးတစ်ကံဇာတာကုန်ကျကြောင်းကားတစ်စီးရှိခြင်းသင်ဖယ်ရှားပစ်ရနိုင်တယ်လို့ဆန္ဒရှိကြောင်း.
Find စျေးပေါယာဉ်သမိုင်းပြတိုက်အစီရင်ခံစာ ဒီမှာ